Search Jobs In Myanmar | Find Jobs | Myanmar Advertisement
Home » Jobs (Page 14)
Listings for Jobs (178)
Employer Job Offer, Jobs | Polygon Global | October 21, 2013
1. Designer /Drafter	M/F (1) posts •	Graduate In any Bachelor Of Engineering (or) diploma in Engineering (or) other Degrees who can draw in 2D, 3D drawings...
Job Post for Accountant (Urgent)
Accountant M/F (1) Posts •	Degree of B.Com, B.Act, B.E Com (or) B.A Eco •	LCCI Level I, II, III In related field minimum (5) years experience •	Ab...
Employer Job Offer, Jobs | joseph | October 17, 2013
- Creative Logo Designer ပုဒ်ပြတ် ၃၀၀၀၀ ကျပ်။ -Customer ၏ Brief မှ ကွဲပြားသော ဒီဇိုင်း ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ပေးရမည်။ -Original PSD file submit လုပ်ရမည်။ -Project...
WordPress Hardcore Developer Freelance
- Wordpress specialist –Hardcore developer / Project Based လုပ်ကိုင်နိုင်သူ အလိုရှိသည်။ - အစမ်းခန့် ကာလအတွင်း အရည်အချင်းကောင်းမွန်ပါက အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်းလေ ...
နေ့ စား အရောင်းဝန်ထမ်း အလိုရှိသည်
Employer Job Offer | mmrblb | September 3, 2013
-နေ့ စား အရောင်းဝန်ထမ်း အလိုရှိသည်။ - တစ်နေ့၃၀၀၀ ကျပ်။ -ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက် ချက်ချာရမည်။ -ပညာအရည်အချင်း ၁၀တန်း -အလုပ်တာဝန်အတွက် အသေး...
နစေ့ား အရောငျးဝနျထမျး အလိုရှိသညျ
Employer Job Offer, Jobs | mmrblb | August 10, 2013
-နစေ့ား အရောငျးဝနျထမျး အလိုရှိသညျ။ - တဈနေ့ ၃၀၀၀ ကပျြ။ -ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျပွီး သှကျလကျ ခကျြခြာရမညျ။ -ပညာအရညျအခငျြး ၁၀တနျး -အလုပျတာဝနျအတှကျ အသေးစိ...